🥇 ▷ Nokia Daredevil ayaa laga yaabaa inuu si dhakhso ah u sii daayo Nokia 5.2 ✅
Nokia Daredevil ayaa laga yaabaa inuu si dhakhso ah u sii daayo Nokia 5.2
Faahfaahin dheeri ah iyo sawirada taleefoonada casriga ee Nokia Daredevil ayaa ka soo muuqday baidulada Baidu usbuucii hore. Magaca Nokia Daredevil waa uun magac magac leh, waxaana laga yaabaa inuu suuqa ka soo muuqdo magac kale. Wax yar ka dib muuqaalka usbuucii la soo dhaafay, milkiilaha xanta ayaa bilaabay inuu qiyaaso inuu noqon karo Nokia 6.2 ama Nokia 5.2. Dadka ku jira barta Twitter-ka ee Nokia Anew waxay ku andacoonayaan in taleefanka casriga ah laga soo muuqan karo suuqa sida Nokia 5.2.
Sannadkii hore, HMD Global ma sii deynin hal Nokia oo taleefanno casri ah. Bartiisa twitterka ayaa sheegaya in Nokia 4 (Nokia 4.2) uu yahay kan badali kara taleefanka Nokia 5.1 sanadkii lasoo dhaafay. Sidaas awgeed, Nokia 5.2 waa inay la timaadaa qaar ka mid ah astaamaha horumarsan. Faafinta ayaa sheeganeysa in lagu iftiimin doono “qeybta qaaliga ah” maxaa yeelay waxaa la rajeynayaa in lagu qalabeeyo astaamo ay ka mid yihiin ‘ZEISS optics’, Pure DISPLAY iyo OZO Audio, kuwaas oo laga heli karo moodooyinka sare ee shirkadda. Sidaa darteed, waxay umuuqataa in Nokia Daredevil, oo lagu xantayo inuu la imaado dhamaan tilmaamahan, laga yaabo inuu suuqa ugu soo baxo magaca Nokia 5.2.
Khabiirka Tiknikada Khamiista: Waxaan dib u eegeynaa Nokia & telefoonka Crazy Lipstick Phone (7280) Xulashada Tifaftiraha: Khamiista Teknolojiyada Khamiista: Waxaan booqan doonnaa Nokia & Crazy Lipstick Phone (7280)
Sawirada taleefanka Nokia Daredevil, oo dillaacay usbuucii hore, waxay muujiyeen inay muujineyso muuqaal aan biyo ku xirneyn oo ay kuxiran yihiin biro qaro weyn Muraayada dambe ee casriga ayaa leh mowjad wareega ah, oo ka kooban saddex dareemayaal kaamirooyin ah iyo toosh LED ah. Sida laga soo xigtay xanta, waxay ku qalabeysan tahay 48-megapixel optics ZEISS iyo lens-ka ugu weyn. Telefonka casriga ahi wuxuu kaloo taageeri doonaa shaqada habaynta habeenkii ee qaadashada sawirro dhalaalaya marka loo eego xaaladaha iftiinka hooseeya.
Nokia 5.2 ayaa la sheegay inuu noqon doono mid Android ah. Telefoonka casriga ah wuxuu ku shaqeyn doonaa Snapdragon 660. Telefoonku wuxuu ku qalabaysan yahay batrool awoodu dhan tahay 3500 mAh. Telefoonku sidoo kale wuxuu leeyahay jaakad maqal ah oo ah 3.5mm, qalabka qalabka gadaal gadaal u adeegsado, deked USB-C iyo badhanka qalabka ee kaaliyaha Google. Lambarka mobilada casriga ah waa TA-1198.
Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan taariikhda la bilaabay taleefanka casriga. Waxaan rajeynayaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan taleefanka inuu soo muuqan doono maalmaha soo socda.